စတာလင်, မော်စီတုန်း, အခြားကွန်မြူနစ်တွေဘုရားမဲ့ဝါဒအတှကျအပေါ်သန်းနဲ့ချီသေဆုံး
ဘုရားမဲ့ဝါဒီဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်မြှင့်ရသောတစ်ဦးကဘုံဝေဖန်မှုများအကြမ်းဖက်ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်သူများအတိတ်တွင်ဖြစ်ရပြီဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အတွက်ခြားနားချက်များသို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်တရားမျှတနှင့်ဘာသာရေးအပြောအဆိုမှတဆင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာနေသောအခြားအခြားနားချက်များဖြစ်စေအမြောက်အများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသတ်ပါပြီ။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ဘာသာရေးသည်၎င်း၏လက်ပေါ်မှာအသွေးတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တူညီသောဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒအဘို့အဆိုနိုငျသနညျး
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ၏နာမ၌ကပိုကလူဦးသေဆုံးကြပြီမဟုတ် ဘုရားမဲ့ဝါဒ ဘာသာရေး theists သူတို့ရဲ့ဘာသာတရား၏နာမ၌အသတ်ခံကြပါပြီထက်? အဘယ်သူမျှမ, ဘုရားမဲ့ဝါဒဟာဒဿနိကဗေဒသို့မဟုတ်သဘောတရားမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းမူကား,
ဘယ်လိုအတော်များများကဘုရားမဲ့ဝါဒ & လောက၏နာမ၌ကွန်မြူနစ်များကအသတ်ခံဖူးသလော
ဖြစ်ကောင်း none ။ သန်းပေါင်းများစွာသောလောကနှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီနှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြရသောကွန်မြူနစ်အစိုးရများအောက်မှာရုရှားနှင့်တရုတ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူအပေါငျးတို့ကလူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏ဦးသေဆုံးကြောင်းသျောမဆိုလိုပါ - ပင်အတွက် ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏နာမကိုအမှီ နှငျ့လောက။ ဘုရားမဲ့ဝါဒသူ့ဟာသူနေတဲ့နိယာမကိုအကြောင်းမရှိ, ဒဿန, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး ယုံကြည်ချက်စနစ်က သေဆုံး, လူတွေကိုစစ်တိုက်ခြင်းအရာအဘို့, ဒါမှမဟုတ်သတ်ပစ်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများကအသတ်ခံရတဲ့မပိုတဲ့အရပ်ရှည်ရှည်လူတစ်ဦးအရပ်ရှည်ရှည်၏နာမ၌အသတ်ခံလျက်ရှိသည်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းထက်ဘုရားမဲ့ဝါဒ၏နာမ၌အသတ်ခံလျက်ရှိသည်။ ကွန်မြူနစ်တွေဘုရားမဲ့ဝါဒ၏နာမ၌သတ်မထားပါနဲ့ ...
ဒါဟာနာဇီဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်တွေဟာ Anti-နာဇီစဉ်သူတို့အခြေခံကျကျ Anti-ခရစ်ယာန်ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ဘုံပါပဲ။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် ဂျာမန်ခရစ်ယာန်များသည် သောယုံကြည်ချက်အတွက်နာဇီထောက်ခံ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ ဘုရားသခင်ထံမှဂျာမန်လူမျိုးကိုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟစ်တလာသူ့ကိုယ်သူမကြာခဏဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကား။ နာဇီပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကအစီအစဉ်ကိုအတိအလင်းထောက်ခံနှင့်ပါတီပလက်ဖောင်းများတွင်ခရစ်ယာန်ဘာသာရာထူးတိုး။ ဂျာမနီမှာခရစ်ယာန်တွေကိုသန်းပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ထားနှင့်ဘုံခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်နှင့်သဘောထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာဟစ်တလာနှင့်နာဇီထောက်ခံ။
အတော်များများက theists, အထူးသဖြင့် အခြေခံဝါဒီ , ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့် / သို့မဟုတ်လူ့သဘောသဘာဝအတွက်ဆိုရှယ်လစ်သို့မဟုတ်ကွန်မြူနစ်ဖြစ်ကြောင်းစောဒကတက်ကြသည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုမကောင်းသောအများမှာကတည်းကဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့်လူ့ပယ်ချသင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ တယူသန်ထင်ရာစိုင်းနှင့်အမေရိကရှိကွန်ဆာဗေးတစ်ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ဆန့်ကျင်ကွန်မြူနစ်လှုပ်ရှားမှုကနေအဓိကအား, ဒါကြောင့်ဒီ allged connection ကိုအမေရိကန်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများအတွက်လေးနက်သောအကျိုးဆက်များရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာတူမဖြစ်ကြောင်း ...
စစ်သွေးကြွဘုရားမဲ့ဝါဒီဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီရငျးစှဲဝါဒီတစ်ဦးက New ဘုရားမဲ့ဝါဒများမှာ
ဘာသာရေးသို့မဟုတ် theism ၏ဝေဖန်မှုဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်ဦးလူကြိုက်များတုံ့ပြန်မှုဟာဝေဖန်ရေးa"ကိုတံဆိပ်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် စစ်သွေးကြွ " သို့မဟုတ်ပင် "ဝါဒီ" ဘုရားမဲ့ဝါဒီ။ ဤသည်တံဆိပ်အများဆုံးမကြာခဏနဲ့အတူ Self-ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့သူတွေကိုဆန့်ကျင်ရာတွင်အသုံးပြုသည် "N ကို EW ဘုရားမဲ့ဝါဒ ။ " အဆိုပါပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. "ဝါဒီ" ဖွစျကာဘုရားမဲ့ဝါဒီစရာမရှိမဖြစ်သို့မဟုတ် "အခြေခံ" ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်တံဆိပ်အသုံးပြုသနည်း ဒီအကြောင်းနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမှအများစုကြောင့်ဖြစ်ဟန်နှင့်အခြေခံနှင့်တံဆိပ်ဆန့်ကျင်လိုမုန်းထားဘုရားမဲ့ဝါဒီရန်လျှောက်ထားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဘုရားမဲ့ဝါဒီ, Theism ဘာသာရေးဝေဖန်ဘို့သည်းမခံများမှာ
တချို့က ဘာသာရေးယုံကြည်သူများ အများစုခရစ်ယာန်, တုံ့ပြန် ဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှု အသံ, unapologetic ဘုရားမဲ့ဝါဒီအများကြီးတူဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲခြင်းဖြင့်ဘာသာရေး theism ၏ ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သမားများ နှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၏ဝေဖန်မှုများ ဘာသာရေးသည်းမခံနှင့်ဆင်တူသည်။
အဆိုပါဆိုလိုယုံကြည်သူများဝေဖန်မှုများကြုံတွေ့ရခံရဖို့ရှိသည်မဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားမဟုတ်သလို theism မအလိုအလျောက်ရိုသေခြင်းခံယူသင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမှားယွင်းနေသည်။
ဖြစ်လျက်ရှိ Irreligious ရာဇဝတ်မှုလိုပဲအန္တရာယ်များ, က Short-မျက်မှောက်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်
အတော်များများက antisocial နှင့်ရာဇဝတ်မှုအပြုအမူနှင့်အတူတွဲဖက်ဘုရားမဲ့ဝါဒ, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအခိုင်အမာထက်အနည်းငယ်ပိုနေသောခေါင်းစဉ်: သက်သေအထောက်အထားများသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများမပါဘဲရှင်းလင်းသောအခိုင်အမာ။ Anti-ဘုရားမဲ့ဝါဒီဝေဖန်သူများကပူဇော်ရသောအများဆုံးကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့်ဘုရားအဘို့အလိုအပျသညျ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအမေးတောင်းစားတောင်းဆိုမှုများများမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားအပြုအမူ ။ တဦးတည်းအတော်လေးမကြာသေးမီ (နှင့်ချို့ယွင်းချက်) ငြင်းခုံနေတဲ့ဇီဝကမ္မ, လူတွေနောက်ကွယ်မှဇီဝအကြောင်းပြချက်ရှိကွောငျးတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ် - သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးယောက်ျား - ဘာသာရေးနှင့်တပါးသောဘုရားတို့ကိုငြင်းပယ်။ ဖြစ်လျက်ရှိ Irreligious ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကဲ့သို့ပင်မဖြစ်ပါတယ် ...
အတော်များများက theists သူတို့၏ဘုရားဖန်တီးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သူတို့ယုံကြည်ချက်, စိတ်နေသဘောထား, အပြုအမူ, စတာတွေအပေါငျးတို့သတိုင်းတာရန်ထင်ထားတဲ့ဆန့်ကျင်ရည်မှန်းချက်စံချိန်စံညွှန်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းယုံကြည်
သူတို့ရဲ့ဘုရားမရှိရင်သူတို့မည်သူမဆိုမလျော်ကန်သောသဘောထားများကနေကနေကိုယ်ကျင့်တရား, ဒါမှမဟုတ်သင့်လျော်သော, မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်များအနေဖြင့်စစ်မှန်သောခွဲခြားနိုင်ပုံကိုစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကိုအရ, ထို့နောက်ဘုရားမဲ့ဝါဒီယုံကြည်သူနှင့်လုံးဝဘာမှလုပ်နေတာ, သူတို့ပြန်ကိုင်ဖို့မှာအားလုံးဘာမျှရှိခြင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်စုံတစ်ရာအတွက်ယုံကြလိမ့်မည်နည်း
မည်သို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဘို့အတွက် Junk DNA ကိုထဲကဓာတုပစ်စညျးအထောက်အထားပါသလဲ
Ometeotl, Aztec ဘာသာတရားအတွက် Duality ၏ဘုရားသခငျသညျ
အဘယ်အရာကိုဘုရားမဲ့ဝါဒီမှားလျှင်? သင်ကဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏ကွောကျဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော သင်ကချန့်စယူပါနိုင်သလား?
အဘယ်ကြောင့် Logic အရေးကြီးပါသလဲ
ဘာသာတရားအဖြစ်ဘာသာရေး, နည်းပညာ vs နည်းပညာ
Kacey Musgraves အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဘယျသို့သောဝါကျများ On-Run နေနှင့်သင်ကသူတို့ကိုဘယ်လို Fix သလား?
Renaissance Humanitarian သည်
ခက်နေတဲ့ဘောလီဘော Hit လုပ်နည်း
အဆိုပါစီးတီးလှပလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (1893 - 1899)
က Java ပင်လယ်ပြင်၏တိုက်ပွဲ - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
မှဲ့နေ့ဆိုတာဘာလဲ - နေ့စွဲနှင့်မည်သို့အခမ်းအနားကျင်းပရန်
"သင်၏ကောလိပ်အင်တာဗျူး Up ကိုဝက်အူ 13 နည်းလမ်းများ"
Natal ဂြိုလ်ဖို့ aspect Eclipse
ရှိတ်စပီးယားရဲ့ရစ်ချက် III ၏အမျိုးသမီးများ
တစ်ဦးဘိုးလင်းဘောလုံးအပေါ် PAP ရှင်းပြ
ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများနှင့် Tearjerkers - ထိပ်တန်းဆယ်ပါး Saddest Play
အဘယ်အရာကိုစက်ရုံလယ်တွေအတွက် Molting အတင်းအဓမ္မသလဲ?
Brandeis တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ပထမဦးစွာအင်ဒိုချိုင်းနားစစ်ပွဲ: Dien Bien Phu ၏တိုက်ပွဲ